Tababaraha kooxda Arsenal oo sheegay in kooxda Chealsea ay uga... | Universal Somali TV
Tababaraha kooxda Arsenal oo sheegay in kooxda Chealsea ay uga cadcadahay hanashada horyaalka Premier League
December 30 2016 16:33:06
Arsene Wenger ayaa markale qirtay guuldaro horyaalka Premier league ah oo kooxdiisa ku timid kadib markuu si layaab leh u sheegay in kooxda ay London ku xifaaltamaan ee CHelsea ay “Si Weyn Ugu Cadcadahay”.
Kadib markii ay gaareen 12 guul oo xiriir ah, Blues ayaa lix dhibcood oo nadiif ah ku heysa hogaanka horyaalka Epl waxaana saree u eegaya Liverpool iyo Man City halka Arsenal ay ku jirto afaraad, wuxuuna Wenger qabaa in Chelsea ay heysada fursada ugu weyn ee ay ku hanan karaan horyaalka.
“Kulamada fool ka foolka ah ee kooxaha waa weyn ayaa dabcan noqon doono kuwa ugu muhiimsan, laakin Chelsea ayaa si weyn ugu cadcad horyaalka, ayaga ayaan ku xiranahay” ayuu saxaafada u sheegay ka hor kulanka ay kooxdiisa la leedahay Crystal Palace beritoole.
“Waa ay guuldareysan karaan, wali waxaa jirta wado dheer, koox waliba ayeey xaalada ku adkaan doontaa gaar ahaan kulamada fool ka foolka ah”.
Arsenal ayaana horyaalka ingiriiska markale dhadhamin tan iyo xilki ciyaareedkii 2003-2004 markaasoo ay ku qaadeen horyaalka guuldaro la’aan.
Kan-xigaMan Utd 2-1 Middlesbrough: Anthony Ma...
Kan-horeEden Hazard oo sheegay in kooxda chel...
33,284,538 unique visits